umkhondo 1: phakama — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Namhlanje yiloo mini xa sonke ukunyuka
iankile yam owada undilinde waphila
Sobabini kuma nxamnye ubuxoki evuthayo
Ke ngoku ukuba ndiyifumene amaphiko yam ndikulungele ukuya
phakama, sonke ukunyuka
Namhlanje yiloo mini
Nokubamba Mna umva ukuze baqhayise ngezi iingoma ezifana
Ndivuya bathuka em, ukuze umva zobun lammonxoza
Yeka banyamekela Eneneni andizange ekhohlo mna bebabaza
Mamela phezulu sasekunene kuni akuyi funeke kundibuza kabini
Ndilapha, Ndiza apha ukuqhayisa kuye ngathi mna yaziwa ngokuba
Nangona abantu rhona Mmelika aye kuba
Na uThixo wam akukho lwemveli, Kuba yena ngokwenene, ke ngokwenene
Ngoku nesihloko ngasekunene
Ndiyazi ukuba umyili, nguye ngaphezu NGAPHAMBI zibhabha phezulu emafini ke zenzelwe ngezandla zakhe
Ndiza ukubhala ukukuxelela ukuba obu ubomi flash ngepani
Indlela Mmelika umhlala xa sifuna Cryer ukuba usixelele ukuba Vuka, ume?
Khangela izicwangciso yo
dude yam, ukuba ngamangcwaba hayi kwikhaya lakho
Awukwenzi Yindlela komhlaba ixesha elide kakhulu
Ezintandathu enzulu umhla kwi ilitye yakho
Bonke bathi, "Loo mfana uye"
Ima kancinci, musa ukuba ndifuna ukuya ekhaya?
Musani ukuba ndifuna kuba ngaphezu clone?
Uyazi ukuba lento umthanda kwaye ube waziwa?
Sonke bakhwela phezu ngecala elingafanelekanga
Kodwa thina emana isifuba kwethu mfo engalunganga
"Akuyomfuneko ukuba uThixo"
Ukuze bangatsho kunye nemilomo, kodwa senza ntoni kubomi bethu iphela
Nantso ubuxoki ngqindilili, nguye eyona eliphezulu hayi kufuphi, sonke siyafa
John 5:28,29, ijaji apha!
sean • EtiMnga 9, 2014 ngexesha 12:40 pm • impendulo
Ndiyawuthanda lo ngoma kwaye wonke umculo! UThixo usinike isipho akukho mfihlakalo ukuba imihla yokugqibela yaye wena zikhokelela abantu lowo onika ubomi! Yinto entle kuba maxesha Gonna ukufumana crazy, kodwa ayikho into enokuthintela xa sivuka.
Kwakho kukulukuhlile nam zonke ezenziwa zam! #116
eliassimbeye • EtiMnga 10, 2014 ngexesha 8:54 mna • impendulo
abo banamandla lyrics umntu ndivela Zambia apha iingoma kunzima ukululandela kufuneka usebenze nzima ukuze imali download.so i nzima ukusebenza kuba week.anyway emva i umhlambi album yayilingana ngayo.
PastorTony • EtiMnga 11, 2014 ngexesha 10:45 pm • impendulo
ukumthanda lo guys umculo!! Ngokwenene Wanna afumane Ecaweni yam Manassas Va. Yintoni intsikelelo Nkulunkulu!
Morgan • EtiMnga 31, 2014 ngexesha 12:59 pm • impendulo
ndingu 14 kunye im nangoku Esayama ngubani noko uThixo,ke ukuba ngenene okanye. Ndiyazi eneminyaka wam wonke engaqinisekanga, kodwa ngokwenene ndifuna ukuba ezithile. Le ngoma yandinceda ukwazi ukuba akuyomfuneko ukuba babe ekungaqinisekwanga kwakhona kuba yenze izinto ezininzi ngam kwaye akukho mfuneko ke ukuba kuyathandabuzeka.
Tshangana • EyoMqungu 29, 2015 ngexesha 1:14 mna • impendulo
Uhambo lee ubakhuthaza enkulu kum. Indlela i love ukudibana nawe ngenye imini umntu. Abantu ova hir endixelela sijonga kwaye senze ngokufanayo. Wena onamandla isixhobo esinjalo ezandleni zikaThixo. UThixo akusikelele umzalwana kuwe!
PhantomL82 • EyeDwarha 13, 2015 ngexesha 9:49 pm • impendulo
I, ngubani bacula hook?